'नयाँ बजेटले क्यापिटल मार्केटमा बहार ल्याओस्, युवामा आशा जगाओस्' : विनोद चौधरी
इसेवाबाट बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा लखपति बन्ने मौका, एकजनाले लाख रुपैयाँ जित्ने
चुनाव सकिएपछि सस्तियो कुखुराको मासु, उपभोक्ता मूल्य किलोको ३९५ रुपैयाँमा झर्यो
आइएमई पेबाट हवाई टिकट काट्नेले सुनको सिक्का जित्न सक्ने, हरेक १५ दिनमा दुईजनालाई सुन
भारतबाट गहुँ नआए नेपालका सबै मैदा उद्योग बन्द हुने
भारतको गहुँ निकासी प्रतिबन्धले नेपाली मैदा उद्योगमा हलचल, असारदेखि सबै उद्योग बन्द हुने, 'सरकारले खोल्न पहल गर्नुपर्छ'
भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपाली मैदा उद्योगमा हलचल, असारदेखि सबै उद्योग बन्द हुने, 'सरकारले खोल्न पहल गर्नुपर्छ'
बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुणसहितका जलविद्युतलाई ७० अर्ब बजेट
आगमी बजेटः ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँँ पाउने, ठुला जलविद‍्युतको निर्माण थाल्न ७० अर्ब ५८ करोड छुट्याइँदै, आउँदैछन् यस्ता कार्यक्रम
२९ वर्षका प्रशान्त सम्झन्छन्, ' म सानैदेखि सफ्टवेयर बनाएर बेच्थें र आम्दानी पनि राम्रै हुन्थ्यो। मैले
काठमाडौं। तरलता संकटको वर्तमान अवस्थामा समेत व्यवसायलाई फराकिलो आकार दिन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक सफल छ। तेस्रो त्रैमासको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्दा सेञ्चुरीले एक…
केही दशकयता नेपालमा धेरै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू भए। जसको फलस्वरूप दिगो सामाजिक आर्थिक भौगोलिक र मानव स्रोत संसाधन विकासका निमित्त अपरिहार्य रहने विभिन्न आयामहरूको…
काठमाडौं। शुक्रबार ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि सरकारले लगभग सबै तयारी सकेको छ। एक दिन मात्र टाढा रहेको निर्वाचनका लागि मतदाताहरु आ-आफ्ना स्थानीय तहमा फर्किने क्रम यतिबेला अन्तिम प्रहरमा…
काठमाडौं। व्यवसायी तथा सासंद विनोद चौधरीले नयाँ बजेटले पुँजीबजारमा नयाँ बहार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। संसदको बजेट अधिवेशनमा भाग लिँदै सासंद चौधरीले जनाताले ठूलो रकम पुँजीबजारमा फसेको भन्दै बजार बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
इन्धन र विद्युतको सहुलियत घटाउँदै पाकिस्तान, ३० विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार पाकिस्तानले आर्थिक सुधारका लागि सहुलियत घटाउनेदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो।
भरतपुरमा रेनु दाहालले लिइन् तीन हजार बढी मतको अग्रता, विजय र जगन्नाथलाई कति मत?
काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख पदकी उम्मेदवार रेनु दाहालले तीन हजार १२६ मतले अग्रता लिएकी छिन्। महानगरपालिकामा ४० हजार ९६३ मतगणना हुँदा दाहालले अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लगेकी हुन्।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक विस्तार भएको ३ वर्षमा पनि बनेन पुल, छैन आवश्यक बजेट
काठमाडौं। काठमाडौंको लाइफलाइन मानिने नारायणगढ-मुग्लिन सडक विस्तार सकिएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि पुल भने बन्न सकेको छैन्। यो सडकखण्डमा १९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसमा १५ वटा पुल निर्माणाधिन छ।
यसका अतिरिक्त योजना अवधिभर हरेक दिन आइएमई पे एपबाट हवाई टिकट काट्दा दैनिक एकजना बिजेताले चन्द्रागिरि केबलकारको दुईवटा टिकट र हरेक हप्ता एकजना बिजेताले एउटा चाँदीको सिक्का जित्न सकिने बताइएको छ।
एभरेष्ट बैंकले लुम्बिनीको परासीमा खोल्यो शाखा, ११६ पुग्यो शाखा संजाल
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र नवलपरासी चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष केशबप्रसाद भण्डारीले संयुक्त रुपमा परासी शाखाको उद्घाटन गरेका छन्।
नबिल र एनबि बैंक मर्जर रोक्न परेको मुद्दा फिर्ता, इजलास तोकिएपछि मुद्दा फिर्ता, मर्जर अघि बढ्ने
काठमाडौं। नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबि) बैंकबीचको मर्जर रोक्न परेको रिट निवेदकले फिर्ता लिएका छन्। एकल इजलासले तत्काल मर्जर अगाडि नबढाउन दिएको आदेश संयुक्त इजलासमा पुगेपछि रिट फिर्ता भएको हो।
नबिल बैंक र लगानी बोर्डबीच एफडिआई ल्याउन सहकार्य, वित्तीय क्षेत्रबाट नबिलले सघाउने
काठमाडौं। लगानी बोर्डको कार्यालय र नबिल बैंकबीच विदेशी लगानीकर्ता प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनका लागि द्धिपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएको छ।
युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी खाद्य संकट निम्त्याउने राष्ट्रसंघको चेतावनी, २ करोड टन रोकियो
काठमाडौं। युक्रेन आक्रमणले विश्वव्यापी खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। युक्रेनमा अघिल्लो खाद्यान्न करिब २ करोड टन अन्न हाल अड्किएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली मैदा उद्योगमा हलचल, असारदेखि उद्योग बन्द हुने
विराटनगर। भारतले गहुँको निर्यात प्रतिबन्ध लगाइरहे नेपालका मैदा र पिठो उद्योग बढीमा असारसम्म मात्र चल्ने देखिएको छ। भारतबाट गहुँ आयात गर्न नपाए साउनदेखि कारखाना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विराटनगरका उद्योगीहरुले बताएका छन्।
दाना उद्योग नेपाल वेलहोप एग्रिटेकको कारोबार ४ अर्ब नाघ्यो, ब्रोइलर दानाको योगदान ७५%
दानाको माग बढ्दा कम्पनीको व्यापार बढेको रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालले जनाएको छ। २०२० मा तीन अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र २०१९ मा तीन अर्ब २४ करोड १० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो। कम्पनीले कुखुराको दानाका साथै माछा, सुङ्गुर, गिरिराज, खसीको आहार उत्पादन गर्दै आएको छ। विजया पेलेट दानाको ब्राण्ड कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्दै आएको केयरले जनाएको छ।
पाइप तथा फिटिङ्स उत्पादक मंगलम इन्डस्ट्रिजको बिक्री २०६% ले बढ्यो, गर्‍यो अर्ब माथिको व्यापार
काठमाडौं। पाइप तथा फिटिङ्स उत्पादक मंगलम इन्डस्ट्रिजको बिक्री वर्षदिनमै २०६ प्रतिशतले बढेको छ। २०२० मा कोरोना महामारीका कारण चपेटामा परेको कम्पनीको व्यापार २०२१ मा रिबाउन्ड भएको छ।
जेट एयरवेजले पुन: उडानका लागि अन्तिम तयारीमा, दिल्ली-मुम्बई प्रुभिङ फ्लाइट गर्‍यो
काठमाडौं। तीन वर्षदेखि ग्राउण्डेड जेट एयरवेजले पुनः उडानका लागि अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ। कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक उडान पुनः सुरु गर्न आइतबार दिल्ली-मुम्बई प्रुभिङ फ्लाइट गरेको छ।
दोर्दी खोला जलविद्युतको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको लागि साधारण शेयर भर्ने आज अन्
अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरुका लगि शेयर दरखास्त आव्हान
शिवश्री हाइड्रोपावरको नोक्सानी २८ करोड ९० लाख आव. ०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट तथा रकम फिर्ता भुक्त्तानी सम्बन्धी सूच
एनएमबि बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री बन्द सम्बन्धी सूचना
रिभर फल्स पावरको साधारण शेयर सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री बन्द सम्बन्धी आज अन्तिम दिन
होन्डाको दुई नयाँ एसयुभी आउँदै, डब्ल्यु आर-भीलाई हटाएर ल्याउन लागेको गाडी यस्तो हुनेछ
८-सीटर ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर १३० आउँदै, मे ३१ मा डेब्यु, अफ-रोड फोकस डिफेन्डर एसभीएक्स पनि तयार
काठमाडौं। ८-सीटर ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर १३० एसयूभी मे ३१ मा डेब्यु गर्ने भएको छ। यो लाइन-अप सबैभन्दा लामो डिफेन्डर हुने कम्पनीले जनाएको छ।
काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावका कारण माग ह्वात्तै बढ्दा महँगिएको कुखुराको मासुको मूल्य निर्वाचन सकिएपछि पुनः सस्तिन थालेको छ।गतसाता चुनावकै कारण गाउँगाउँमा खपत चुलिँदा बोइलर कुखुराको मासुको मूल्य बढेको थियो।
सुन तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढ्यो, बिहीबार बजार मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ३ सय, चाँदी पनि बढ्यो
काठमाडौं। सुनको मूल्य बिहीबार पुन: बढेको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर कारोबार मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्ययवसायी महासंघले जनाएको छ।
डलरको भाउ हरेक दिन 'एग्रेसिभ', मूल्य अहिलेसम्मकै उचाइमा, रेमिटेन्स पठाउनेलाई लाभ, आयात महँगिने
काठमाडौं। अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि एक डलरको भाउ १२४ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेको छ। यो रिफरेन्स रेट हो।
काठमाडौं। इसेवाले ‘बीमा शुल्क भुक्तानी गरिन्छ, लखपति बनिन्छ’ योजना सार्वजनिक गरेको छ। बीमितहरुले घरमै बसेर बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले योजना सार्वजनिक गरेको इसेवाले जनाएको छ।
नेपालमा मोबाइल इन्टरनेटको गुणस्तर खस्किँदा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा भने गर्‍यो सुधार
काठमाडौं। नेपालमा टेलिकम अपरेटरहरुले दिँदै आएको मोबाइल इन्टरनेटको गुणस्तर खस्किएको छ। इन्टरनेट स्पीड परीक्षण गर्ने प्रख्यात प्लाटफर्म स्पीड टेस्ट ग्लोबल इन्डेक्सको मासिक प्रतिवदनले यस्तो तथ्य देखाएको छ।
असारमा आयोजना हुँदै डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ, डिजिटल एजेण्डा र अवधारणामा छलफल हुने
कार्यक्रममा डिजिटल नेपालको अभियान, डिजिटल रुपान्तरणको प्रयास, नविनतम प्रविधिहरु र यसका अभ्यासहरुसँग जोडेर सान्दर्भिक बहसहरु सञ्चालन गरिने आयोजक आइसिटी फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले बताए।
गौतम बुद्धबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज बनाइँदै, श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भैरहवाबाटै हुने
काठमाडौं। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 'जिआइए' बाट श्रम मुलुकमा जाने नेपालीका लागि श्रम स्वीकृति प्रकृया सहज हुने भएको छ। अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति दिँदै आएको वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरमार्फत जाने कामदारलाई काठमाडौं आउन नपर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो।
काठमाडौं। सप्ताहान्तमा रेष्टुरेन्टहरु जाने र नयाँ खाना एक्सप्लोर गर्ने परिपाटी अचेल बढेको छ। साथीभाइ र परिवारसँग विकेन्ड